Ama-Biorefineries asebenzayo nge-Ultrasonic Process Intensification - Hielscher Ultrasound Technology
I-Ultrasonication inqubo yokuqinisa inqubo, efakwa ezinqubweni ezahlukahlukene kuma-biorefineries. Izinqubo ezijwayelekile ezizuzisa kakhulu ekwelashweni kwe-ultrasonic ukukhishwa, ukusabela okuncane okungafani nezinye izinhlelo ezibandakanya ukuxubana okukhulu, i-homogeniaztion nokusabalalisa. I-Ultrasonication isheshisa izinqubo nokusabela futhi ibenze basebenze kangcono. Imiphumela yezinqubo ezikhuthazwa nge-ultrasonically yizithelo / okukhiphayo okuphezulu namazinga aphezulu okuguqulwa.
I-biorefinery iyisikhungo sokukhiqiza esihlanganisa izinqubo zokuguqulwa kwe-biomass nemishini yokucubungula ukukhiqiza amafutha, amandla neminye imikhiqizo enenzuzo njengamakhemikhali avela entweni eluhlaza ye-biomass. Ama-biomass ajwayelekile acutshungulwa kuma-biorefineries afaka izinto zokusetshenziswa ezifana nemfucuza yezolimo nemikhiqizo, ekhushulwa ngamabhayisikili ibe yimikhiqizo ehlukahlukene enezelwe, enezinto eziphilayo, isb., Ukudla, okuphakelayo, amakhemikhali, i-bioenergy (ama-biofuels, amandla kanye / noma ukushisa ). Izinqubo zokukhiqiza zomshini we-biorefinery zenzelwe ukuthi zisimame futhi zilungele imvelo. Ngokufana nokucwenga okuvamile, ama-biorefineries anganikeza amakhemikhali amaningi ngokuhlukanisa izinto zokuqala ezingavuthiwe (i-biomass) zibe ama-intermediates amaningi (ama-carbohydrate, amaprotheni, ama-triglycerides) angaguqulwa futhi abe yimikhiqizo enezelwe inani. Isici esisemqoka sezindawo zokuphefumula ukwenziwa kwe-valorization kanye nokuvuselelwa kabusha / ukufaka upcycling kwemfucumfucu efana nemfucumfucu yezolimo, yasemadolobheni kanye neyezimboni ngendlela yokuguqula i-biomass engenamsebenzi ibe yizinto ezibalulekile.
Ama-Biorefineries aqiniswe nge-Ultrasonically
Ngokuhlanganiswa kwe-ultrasonication, izinqubo eziningi ezifana nokukhishwa, ukugaya, ukuhlakazeka, ukuguqulwa kwe-transesterification phakathi kwabanye abaningi kungaqhutshwa kahle kakhulu. Ukuqiniswa kwenqubo ye-Ultrasonic emshinini we-biorefinery kuhlose kakhulu ukwenza ngcono isivuno, ukwenza izinqubo zisebenzise isikhathi esiningi namandla-futhi kuthuthukise ubumsulwa nekhwalithi yomkhiqizo wokugcina. I-Ultrasonication inganikela kuzinqubo ezahlukahlukene zebiorefinery.
Izicelo Eziqinisiwe Ngokwe-Ultrasonically
Milling, ukuhlakazeka kanye deagglomeration of izinhlayiya
Ukusabela kwe-Sonochemical (i-sono-synthesis, i-sono-catalysis)
Isizinda se-Ultrasonic kanye ne-homogenization ye-biomass eluhlaza ukuze kukhishwe futhi kuhlukaniswe izakhi ezibalulekile
Isebenza kanjani i-Sonication? – Isimiso Esisebenzayo se-Ultrasound
Ukusebenza okuphezulu kwe-ultrasonic processing, high-intensity, low-frequency ultrasound kwenziwa nge-ultrasound generator futhi kudluliswa nge-ultrasonic probe (sonotrode ibe uketshezi. High-power ultrasound kubhekwa njenge-ultrasound ebangeni elingu-16-30kHz. iphenyo iyanweba nezinkontileka isib, ngo-20kHz, ngaleyo ndlela idlulise ukudlidliza okungama-20 000 ngomzuzwana kulokho okuphakathi. Lapho amagagasi e-ultrasonic ehamba ngoluketshezi, kushintshana imijikelezo ephezulu yengcindezi (ukuminyanisa) / ingcindezi ephansi (rarefaction noma ukunwebeka) idala amabhamuza emizuzu emincane noma izimbotshana, ezikhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana yengcindezi.Ngaphakathi kwesigaba sokuminyaniswa kuketshezi namabhamuza, ingcindezi iba muhle, kuyilapho isigaba se-rarefaction sikhiqiza i-vacuum (ingcindezi engemihle. aze afinyelele usayizi, lapho engeke akwazi ukumunca amandla athe xaxa.Ngalesi sikhathi, agxumagxuma ngamandla. imiphumela enamandla kakhulu, eyaziwa njengesimo se-acoustic / ultrasonic cavitation. I-acoustic cavitation ibonakala ngemiphumela eminingi enamandla kakhulu, ethinta uketshezi, izinhlelo eziqinile / eziwuketshezi kanye nezinhlelo zegesi / uketshezi. Indawo yamandla aminyene noma indawo yokubamba iqhaza yaziwa njengendawo ebizwa ngokuthi indawo eshisayo, enamandla kakhulu endaweni eseduze ne-probe ye-ultrasonic futhi yehla ngamabanga akhulayo ukusuka ku-sonotrode. Isithombe kwesobunxele sikhombisa i-cavitation eqinile kuphenyo lwe-1kW le-ultrasonic emanzini. Izici eziyinhloko ze-cavitation ye-ultrasonic zifaka phakathi amazinga okushisa aphakeme kakhulu nezingcindezi kanye nokwehluka okuhlukile, iziphithiphithi nokusakazwa ketshezi. Ngesikhathi sokufakwa kwezikhala ze-ultrasonic ezindaweni ezishisayo ze-ultrasonic, amazinga okushisa afinyelela ku-5000 Kelvin, izingcindezi ezingafika kuma-200 atmospheres namajets wamanzi anama-1000km / h angalinganiswa. Lezi zimo ezivelele ezinamandla amakhulu zifaka isandla kumiphumela ye-sonomechanical ne-sonochemical eqinisa ama-biomass nezinhlelo zamakhemikhali ngezindlela ezahlukahlukene.
Umthelela omkhulu we-ultarsonication kumiphumela ye-biomass kusuka emiphumeleni elandelayo:
Umthelela: Izindiza zamanzi nokusakazwa okwenziwe yi-ultrasonic cavitation kusheshisa okuqinile kuketshezi, okuholela ekushayaneni kwe-interparticluar. Lapho izinhlayiya zishayisana ngejubane eliphakeme kakhulu, ziyakhukhula, zichitheke bese zigaywa futhi zihlakazeke kahle, ngokuvamile ziye phansi kusayizi we-nano. Okwezinto zebhayoloji njengezicubu zezitshalo kanye nemfucumfucu ye-bio, amajetshi aphezulu e-velocity liquid kanye nemijikelezo yokushintshanisa eshintshashintshayo iphazamisa izindonga zeseli futhi idedele okokusebenza kwe-intracellular. Lokhu kubangela ukukhishwa okuphumelelayo kwamakhemikhali e-bioactive nokuxubana okufana kwe-biomass.
Ukusebenza okuphezulu kwe-ultrasonics inqubo eqinisa inqubo esetshenziswa ezimbonini eziningi. I-Ultrasonication isetshenziselwa ukucubungula uketshezi nama-slurries ukuze kuhlanganiswe futhi kwenziwe homogenise, kukhuthaze ukudluliswa kobuningi, kukhishwe izinhlanganisela kanye / noma ukuqala ukusabela kwamakhemikhali.
Izicelo ezijwayelekile ze-ultrasonication kuma-biorefineries yilezi:
ukukhishwa kwamakhemikhali abalulekile avela ku-biomass (isb. amaprotheni, ama-pectin, isitashi njll.)
i-biodiesel synthesis evela kumafutha wemifino asetshenzisiwe namafutha ezilwane
I-UIP4000hdT – Isistimu ye-4kW yamandla we-ultrasonic ye-sonication e-inline eqhubekayo yama-slurries
Amaprosesa aphezulu we-Ultrasonic we-Biorefineries
I-Hielscher Ultrasonic ikhiqiza futhi isakaze ama-mixers e-shear ephezulu kakhulu ekusebenzeni okuphezulu okufana ne-homogenisation, ukuxuba, ukuphazanyiswa kwamaseli, ukuhlakazeka, ukukhipha, ukusabalalisa, ukuchithwa kanye nokuqaliswa kokuphendula kwamakhemikhali. Iziphenduli ze-Ultrasonic zenziwa kuma-biorefineries emhlabeni jikelele ukuze kwandiswe ukusebenza kahle, isivuno kanye nezinga lokuguqulwa kwezinqubo ezahlukahlukene.
Imishini ye-ultrasonic esebenza kahle kakhulu yezinqubo ze-biorefinery itholakala kalula ngebhentshi-phezulu, umshayeli kanye nokufakwa kwezimboni. Njengoba izinhlelo ze-ultrasonic njengokukhishwa, ukwahlukana, ukuncibilika, ukuthuthukiswa kokudluliswa kwabantu abaningi, i-homogenization kanye ne-deaeration sekuvele kuyizinqubo ezisunguliwe, inguquko kusuka ekuhlolweni kokuqala, ukwenziwa kahle kokuya kuzidingo zenqubo yakho ethize kanye nokufakwa kohlelo lwe-ultrasonic olwemboni ngokuphelele kanye / noma uhlelo lwe-leaching iyashesha futhi ilula.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokucubungula i-biomass ngaphansi kwezimo ezisebenza kahle kakhulu ze-ultrasonic. I-sonication efaneleke kahle ye-biomass upcycling!
Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo. Lokhu kwenza imishini ye-ultrasonic ye-Hielscher ithuluzi lomsebenzi elithembekile eligcwalisa izidingo zakho zenqubo ye-biorefining.
Njengebhizinisi eliphethwe ngumndeni neliphethwe ngumndeni, i-Hielscher ibeka phambili amazinga aphezulu ekhwalithi yamaprosesa ayo e-ultrasonic. Onke ama-ultrasonicators aklanyelwe, akhiqizwa futhi ahlolwa kahle ekomkhulu lethu lasekhaya eTeltow ngaseBerlin, eJalimane. Ukuqina nokuthembeka kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuyenza ihhashi lomsebenzi ekukhiqizeni kwakho. Ukusebenza okungu-24/7 ngaphansi kokulayishwa okugcwele futhi ezindaweni ezifuna kakhulu kuyisici semvelo samaprosesa aphezulu we-ultrasonic we-Hielscher nama-reactor. Ithimba lethu elinamakhono likulungele ukukusiza ngolwazi lwenqubo, ukuqeqeshwa nokusekelwa.